I-125 YEETATOO EZIBALASELEYO ZAMADODA: IIMBONO EZIPHOLILEYO + ZOYILO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-125 iiTattoos eziLungileyo zaMadoda
Iimpawu zangaphambili zivumela uninzi lweyona tattoo ilungileyo yamadoda. Iitattoo zengalo esezantsi zipholile kwaye ziyathandwa kuba umphambili ubonelela ngendawo eyoneleyo yemibono yoyilo kodwa inokugqunywa xa kukho imfuneko. Ngapha koko, uyilo olulula, oluncinci lunokuba namandla kwaye lube nentsingiselo njengombhalo oqinileyo wesandla sangaphambili.
Ukuba ucinga malunga nokufumana i-inki, zininzi izimvo zetattoo eyothusayo yokujonga. Ukukukhuthaza, siye saqulunqa igalari yezona tattoos zeengalo eziphambili zamadoda. Ukusuka kwi-tattoo yengalo yangaphandle esonga phantsi kwengalo yakho kwaye idibanise esihlahleni sakho kwi-tattoo yangaphakathi engaphezulu enabela ngaphezulu nangaphezulu kwi-bicep yakho nengalo ephezulu, siqinisekisile ukubandakanya zonke iitatoo ezimangalisayo kubafana.
Jonga ezi yoyilo eziphambili ze tattoo zamadoda anokuzifumana izimvo ezipholileyo ukufumana i-inki engalweni yakho.
1Iingcamango zeTattoo ezipholileyo
MbiniEyona yoyilo ilungileyo yeTatoo
Iingcamango zeTattoo ezipholileyo
Iitattoo ezipholileyo zengalo ziza ngeendlela ezininzi, izitayile kunye nemibala. Ukusuka kwi- ukakayi iya ku inamba , Ingcuka , Ingonyama , isikhova , ikhampasi, phoenix , wavuka , umvuni okrakra, ingelosi, umnqamlezo kwaye nantoni na phakathi, abafana baneendlela ezahlukeneyo zobugcisa.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uyamkele eyona mvo ilungileyo ye tattoo ithatha ubungakanani, ukubekwa, kunye nokubonakala kuthathelwa ingqalelo.
Umzekelo, ii-tatoo zamadoda ziya zixhaphake njengoko abafana bekwazi ukufihla ngokulula i-inki yabo kwindawo yokusebenza. Nangona kunjalo, nangona uluntu lungasacalucaluli abantu abanobugcisa bomzimba obonakalayo, kusekho abanye abaqeshi kunye nabantu abazijonga iiTattoo njengezingabalulekanga.
Ngesi sizathu, kuya kufuneka ucinge malunga nokuba uyafuna na itottoo engaphezulu encinci, uyilo olulula kwicala lakho elingasemva ingalo , okanye isiqingatha se tattoo emkhonweni wakho osezantsi osika phambi kwesihlahla.
Enye into ekufuneka uyikhumbule ziintlungu. Nangona itattoo ibuhlungu kangakanani yahlukile kumfana ukuya kumfana, kukho iindawo zomzimba eziya kuthi ngokwendalo zenzakalise ngakumbi. Ngethamsanqa, umphambili yenye yezona zincinci iindawo ezibuhlungu ukufumana umvambo .
Ulusu apha lutyebile, kwaye umaleko wemisipha ubonelela ngesikhuseli esinceda ukugcina iintlungu zincinci. Ukuba itattoo yakho iya kugquma ingqiniba okanye isihlahla sakho, iintlungu zinokunyuka kakhulu.
Eyona yoyilo ilungileyo yeTatoo
Nazi ii-tatoo eziphambili zangaphambili. Jonga ezi tattoos zengalo egulayo yamakhwenkwe ukukhulisa ukucinga kwakho kunye nobuchule. Siqinisekile ngokuqokelela kwethu ibadass imibono yengalo ye tattoo iyakukunceda ufumane uyilo olutsha nolwahlukileyo ukuze ufumane i-inki kwingalo yakho.
izindlu zeetshathi zokuzalwa
inyanga yam kunye nophawu oluphumayo
ulufumana njani uphawu lwakho olunyukayo
iimpawu zokuvumisa ngeenkwenkwezi ziyenyuka